Somaliland oo sii deysay xildhibaan Maxamed Faarax Canjeex oo ka tirsan baarlamaanka maamulka Puntland – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Somaliland oo sii deysay xildhibaan Maxamed Faarax Canjeex oo ka tirsan baarlamaanka maamulka Puntland
Wararka naga soo gaaraya maamulka Somaliland ayaa sheegaya in lasii daayay xildhibaan ka tirsan barlamaanka maamulka Puntland oo lagu magacaabo Maxamed Faarax Aadan Canjeex, kaas oo lagu qabsaday dagaaladii dhawaan ka dhacay gobolka Sanaag.
Xildhibaan Maxamed Faarax Canjeex oo in muddo ah ku xirnaa xabsi ku yaala magaalada Ceerigaabo ee maamulka Somaliland ayaa lasii daayey kadib wada-hadalo toos ah oo dhex-maray maamulada Puntland iyo Somaliland.
Wada-hadaladaasi ayaa sidoo kale qeyb ka ahaa odayaasha dhaqanka ee labada dhinac, kuwaas oo kaalin weyn ka qaatay sii deynta xildhibaanka.
Xildhibaan Maxamed Faarax Canjeex oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in sii deyntiisa ay ku timid kadib markii uu wada-hadal dhex-maray madaxda maamulada Puntland iyo Somaliland, kadibna uu madaxweynaha maamulka Somaliland Axmed Siilaanyo amar ku bixiyay in lasii daayo.
Ilaa iyo haatan lama oga sii deynta xildhibaankaasi inay dejin doonto xiisadaha ka dhex aloolsan maamulada Somaliland iyo Puntland, iyadoona sidoo kale ay maamulka Somaliland sii deysay ciidamo badan oo ka tirsan kuwa maamulka Puntland oo dagaaladaasi lagu qabtay.